''Tageerayaal ururada PL ha u noqdeen''
10 Feb 10, 2013 - 7:43:33 AM
Wasiiru dawlaha Ganacsiga dawladda Puntland Maxamuud Maxamed Idiris oo la hadlay Radio Garowe ayaa ugu baaqay siyaasiyiinta diidan hanaanka xisbiyada badan inay joojiyaan talabooyinka amaanka lidiga ku ah wuxuuna sheegay in xukuumadda Puntland
ay qancinayso qof kasta oo wax tabanaya iyadoo la raacayo Dastuurka.
waxaan u jeedinayaa waa la dhaafay waqtigii la oran jiray 8,Janayo ha la gaaro,fursad hore ayaa idin dhaaftay xilal baad doonaysan dalka inaad
ka qabtaan Ururadii diiwaangelintooda la soo dhaafay,tageerayaashii baa
iminka is qoray,markaa ururada mid ku biira haddii kele idinkoo qaylinya baa la tartamayaa”ayuu yiri wasiiru dawlaha ganacsiga Puntland.
la waydiiyey inay suurta gal inay tahay in dawladda Puntland ay la hadlayso xubnaha ka biya diidsan hanaanka xisbiyada badan,ayuu Idiris ka
jawaabay inay mar walba uu furan yahay wada hadalku ayna soo dhawaynayaan cid kasta doonaysa in lala hadlo.
Wasiiru dawlaha ayaa dhaliilay qaabka ay wax ku doonayaan siyaasiyiin uu sheegay inay ka
soo horjedaan Dastuurka,bulshada wuxu ugu baaqay inay ka soo horjeestaan cid kasta oo diidan horumarka Puntland doonaysana inay maskab hadana qabtaan horene u hayey.
Dhinaca kele wasiiru dawlahan ayaa guul ku tilmaamay hanaanka xisbiyada badan ee Puntland u gudubtay,wuxuuna sheegay inuu ka mid yahay golaha dhexe ee Urur siyaasadeedka Horseed ayna marka la tartamo haddii laga badiyo ay ogol yihiin,haddii Ururku horseed guulaystana waxa uu sheegay inay sii wadayaan u shaqaynta & horumarka dalka & dadkaba.
Halkan ka dhageyso Cabdiqani Irbad oo wareystey Wasiiru dowlaha